August 4, 2019 - Myitter
August 4, 2019 Myitter 0
နှစ်ငါးဆယ်ကျော်က မွန်ဆရာတော်တစ်ပါး တည်ထားခဲ့သည့် စေတီဟောင်းတစ်ဆူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က မွန်ဆရာတော်တစ်ပါးတည်ထားခဲ့သော စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တောတွင်းတစ်နေရာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၇)နှစ်ခန့်တွင် မွန်ဆရာတော်ဦးသီလ၀ံသ တည် ထားခဲ့သော ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံစံတူ စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို […]
မိတ်ဆွေတို့ဆိုးနေတဲ့ကံကို (၁) လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် နည်းလမ်း(၅)သွယ် (၁) လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန်နည်းလမ်း(၅)သွယ် 1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် […]
တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ပြန်တွေ့ပါပြီ 4.8.2019 Update….ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ခုန်ချသွားသော ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား တွေ့ရှိဟု ကနဦးသတင်းရ.. 2.8.2019 ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခုန်ချသွားသော စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကုန်းရွာနေ […]
ချစ်သူနှင့်အတူထိုင်ကာ စကားပြောနေစဉ် ၀၄း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အမည်မသိ လူ(၂)ဦးရောက်ရှိလာပြီး “နင်တို့ဘယ်သူတွေလဲ၊ ငါတို့က လူပျောက်ရှာနေတာ”ဟု ပြောဆိုကာ ရည်းစားဖြစ်သူ၏ဖုန်းမီးဖြင့် တရားလို၏မျက်နှာကိုထိုးခိုင်းပြီး ၎င်းတို့ရှာနေသော လူမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ တရားလိုနှင့်ရည်စားဖြစ်သူမှာ ပြန်ရန်ထလာစဉ် အဆိုပါ အမည်မသိလူ(၂)ဦးအနက် ကတုံးဆံပင်(လူမြင်လျှင်မှတ်မိ)နှင့်လူမှ ရည်စားဖြစ်သူကို သစ်သားတုတ်ဖြင့်ရိုက်သောကြောင့် ကိုမှာ လဲကျသွားခဲ့ကြောင်း…… ထို့နောက် […]
4.8.2019 ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ခုန်ချသွားသော ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား တွေ့ရှိပြီ ဖြစ်​ပါသည်​ Update…. 2.8.2019 ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခုန်ချသွားသော စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကုန်းရွာနေ ကိုပြည့်ဟိန်းထက် အား အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း […]
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ Hazyview အမည်ရ မြို့မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ Facebook ကနေ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး(၅)ဦးကို နေအိမ်မှာ ဖိတ်ခေါ်၊ အကြမ်းဖက် အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး၊ ၎င်းရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပဲ လူမသိသူမသိ မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ လူသတ်ရာဇာ အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်(၁၅)နှစ်မှ […]
“သမ္မတရုံး၊ အတိုင်ပင်ခံရုံးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများကို ဗုံးကျဲစမ်းပါ” ဟု ဘူးလက်လှဆွေပြော၊ တပ်ထောက်ခံပွဲများသည် စင်ပြိုင်အစိုးရ ထောက်ခံပွဲပုံစံဖြစ်နေ၍ အရေးယူရန်လိုအပ်လာပြီဟုဆို ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၃ – မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ သမ္မတရုံး၊ အတိုင်ပင်ခံရုံးများကို အမေရိကန်အနေဖြင့် ဗုံးလာကျဲရန် ဘူးလက်ဦးလှဆွေက ပြောဆိုလိုက်သည်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကို အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှု ရှုတ်ချပွဲကို ဩဂုတ်လ […]